GRAPHISOFT họpụtara Huw Roberts dị ka onye isi nchịkwa - Geofumadas
GRAPHISOFT na-ahọpụta Huw Roberts dịka Onye isi oche
Eprel, 2019 ArchiCAD
Onye isi na Bentley gara aga ga-eduga usoro nke usoro mmepe nke ụlọ ọrụ na-esote; Viktor Várkonyi, onye isi ọpụpụ nke GRAPHISOFT ga-eduzi ngalaba nhazi na nhazi nke Nemetschek Group.
BUDAPEST, Machị 29, 2019 - GRAPHISOFT®, onye na - eweta ihe ngwanrọ ngwanrọ maka iwulite ihe owuwu ụlọ na ndị na - emepụta ihe ọmụma, kwuru taa nhọpụta nke Huw Roberts dịka onye isi ọhụụ. Mgbanwe ndị isi na GRAPHISOFT bụ akụkụ nke usoro siri ike na-elekwasị anya na ndị ahịa na ahịa site n'aka ụlọ ọrụ nne na nna ya, Nemetschek Group. Ngalaba Nhazi na Nhazi, nke GRAPHISOFT bụ, bụ onye Viktor Várkonyi, onye bụbu onye isi ụlọ ọrụ GRAPHISOFT. Várkonyi na-eje ozi dị ka onye otu Executive Board na Nemetschek Group.
Maazị Várkonyi, n'oge afọ 27 ya na ụlọ ọrụ ahụ, nyere aka n'ọtụtụ ihe ọhụụ nke teknụzụ nke na-ewusi uto nke BIM zuru ebe niile na ụlọ ọrụ. N'ime afọ 10 ya dị ka Onye Isi Nchịkwa, ọ gbara okpukpu atọ nke ụlọ ọrụ ma nye aka mee ka ọnọdụ GRAPHISOFT dị ka onye isi ụwa na BIM maka ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ na ndị na-ese ihe.
"GRAPHISOFT abụwo akụkụ dị mkpa nke ọrụ m," Maazị Várkonyi na-ekwu. “Enwere m obi ụtọ ịbụ akụkụ nke uto pụrụ iche ya n'ime afọ iri atọ gara aga. N'ile anya n'ihu, ekwenyere m na 2019 ga-abụ afọ mgbanwe maka GRAPHISOFT na Nemetschek Group, na-enye ohere maka mmekọrịta dị ukwuu n'etiti ụdị nwanne anyị nwanyị. Huw Roberts na-eweta GRAPHISOFT “Ahụmịhe azụmaahịa na ikike ndu pụrụ iche, ahụmịhe nke ụlọ ọrụ sara mbara, yana ezigbo agụụ maka inyere ndị ọkachamara AEC aka irite uru na mgbanwe nke teknụzụ. Ekwenyesiri m ike na ụlọ ọrụ ahụ nọ n'aka nri ugbu a iji nweta ihe mgbaru ọsọ ya dị oke mkpa! "
N'iji usoro uto siri ike nke afọ iri gara aga, GRAPHISOFT chọrọ ịhọpụta onye ndu nwere ume, ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, nke nkà ya na ahụmịhe ya ga-agbakwunye ngwa ngwa n'ime ohere dịnụ ma nyere aka na ụlọ ọrụ ahụ. Nhọrọ nke Maazị Roberts, maka ụlọ ọrụ na-aga nke ọma na afọ iri nke ahụmahụ na-edu ndú ma na ụlọ ọrụ na ọrụ ụkpụrụ ụlọ, na-egosipụta mkpebi siri ike GRAPHISOFT iji mee ka ọpụpụ usoro dị ukwuu na-eche ihu n'oge ntụgharị ahịa ahịa ya.
Maazị Roberts, onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ site na ọrụ, arụwo ọrụ ndị isi na njikwa ngwaahịa, ịzụ ahịa na mmepe azụmaahịa n'oge ọrụ ya dị egwu, na-eduzi njigide nke mmetụta na ahịa na uru azụmahịa maka ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị. Isi ihe dị n’ọrụ ya gụnyere afọ 17 nke ndu onye ndu na Bentley Systems, onye nrụpụta ngwanrọ zuru ụwa ọnụ nke njikwa akụrụngwa, yana ọrụ nke Director Director na BlueCielo, ụlọ ọrụ mba na-arụ ọrụ. Ihe nwetaziri Bass na nso nso a. Mgbe ọ na-ebute ụzọ na GRAPHISOFT, Maazị Roberts, onye sitere na Philadelphia, USA. UU., Ga-aga Budapest, Hungary, ebe isi ụlọ ọrụ dị.
Maazị Roberts kwuru, "N'ime afọ niile m na ụlọ ọrụ a, enwere m obi ụtọ na oke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa GRAPHISOFT na ụlọ ọrụ na-akpali akpali ha na-arụpụta n'ụwa niile." "Enwere m obi ụtọ na oke ntinye siri ike nke otu ahụ na-enye ndị ahịa anyị na ndị mmekọ anyị site na mmepe ngwaahịa, ihe ọmụma ụlọ ọrụ na nraranye nke onwe." N'ikwu banyere ihe mere m ji chee na ụlọ ọrụ dị njikere maka ihe ịga nke ọma, Maazị Roberts kwuru:
«Nchikota nke ihe omuma nke ihe omuma na ihe ohuru, omuma ulo oru siri ike na oganihu mgbere ahia na-enye uzo di elu maka isi akwukwo GhariISOFT. Obi dị m ụtọ isonyere ndị otu anyị ka anyị na-agbasawanye ikike anyị iji nye ndị ọrụ anyị ihe ngwọta na uru. Ọ ga-amasịkwa m ịkele Mr. Várkonyi maka ọrụ ya dị mma na-eduzi uto ụlọ ọrụ ahụ na akụ na ụba ego ugbu a na nke siri ike. Steeti, nke bụ ihe dị mkpa maka imezu atụmatụ ebumnuche anyị n’afọ na-abịanụ. "
Maka inweta nkọwa ndi ozo banyere Mr. Roberts, gaa na peeji nke IJI isiGhariISOFT. Maka ozi banyere nwughari nke Nemetschek Group, gaa na nkwupụta mgbasa ozi Nemetschek gọọmentị pịa. Maka ozi ndị ọzọ, ma ọ bụ ịtọọ oge mkparịta ụka na Maazị Roberts, biko kpọtụrụ ndị ọrụ mgbasa ozi anyị na press@graphisoft.com.
GrikISOFTBidoro mbido ahụ BIM na 1984 na ARCHICAD, Ihe mbụ BIM sọftụziri maka ndị na-ahụ maka ime ụlọ. GRAPHISOFT na-aga n'ihu na-eduzi ụlọ ọrụ ahụ na azịza ohuru dịka mgbagha ya BIMcloud, Uwa mbu BIM maka mmekorita nke uwa; na BIMx®, ngwa ụwa na-eduga ngwa maka fechaa nweta BIM. GRAPHISOFT bụ akụkụ nke Nemetschek Group.
Maka ozi ndị ọzọ, gaa na www.GRAPHISOFT.com ma ọ bụ soro anyị na Twitter na @GRAPHISOFT.
Previous Post«Previous Magazin Geomatics - Afọ 40 - 5 Afọ
Next Post Na-amalite nzọụkwụ siri ike na 2019 World Geospatial Forum na AmsterdamNext »